रोगी बन्दै मनोञ्जनकर्मी |
रोगी बन्दै मनोञ्जनकर्मी
प्रकाशित मिति :2017-07-20 14:46:57
काठमाडौं । बालाजुकी करिश्मा शाक्य (नाम परिवर्तन) काठमाडौंको एक नामी दोहोरी साँझमा गीत गाउँछिन् । कलाकार बन्ने रहरले यस क्षेत्रमा छिरेकी करिश्मा अहिले चाहेर पनि मनोरञ्जन क्षेत्र छोड्न सकेकी छैनन् ।
दैनिक १२ घण्टासम्मा माइकमा गीत गाएकै कारण उनको घा“टीमा समस्या देखिन थालेको छ । ‘घाँटीमा मासु पलाएको छ उपचार गर्न धेरै खर्च लाग्छ रे । अब काम गरेर खान सक्दिन जस्तो छ ।’ उनले आँशु खसालिन् ।
दोहोरी साँझमा १२ घण्टा ठूलाठूला आवाजमा गीत घन्किने उनले बताइन् । ‘ठूलो आवाजमा म्युजिक घन्किाउँछन्, मुटु बेस्सरी थर्किन्छ, यहा“बाट कहिले भागौं जस्तो हुन्छ ।’ उनले भनिन् – ‘गायिका बन्ने रहरले पढाइ छोडेँ, परिवारसँग झगडा गरेँ । अहिले पछुतो लागेको छ ।’ घरपरिवारको जिम्मेवारी आफ्नै का“धमा भएका कारण यो क्षेत्र छोड्न नसकेको उनले सुनाइन् ।
मनोञ्जन क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गर्ने अधिकांशलाई कान सम्बन्धी विभिन्न रोग लाग्ने गरेको छ । महिला अधिकारकर्मी सिर्जनाका अनुसार कसैलाई मुटु थर्किरहने रोग लाग्छ । कोही मानसिक रोगी बनेका छन् ।
रातभरि काम गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरु सुत्नै नपाउने । समयमा खान नपाउने । खान पाइहालेपनि अखाद्य चिजहरु खान दिइने पुनले बताइन् । खाने समय नमिल्दा र बासी खानेकुरा खानुपरेकै कारण अधिकांश पेटको रोगबाट प्रताडित हुने गरेको उनले जानकारी दिईन् ।
चाबहिलकी भीमा सुवेदी डान्स बारमा वेटरको काम गर्छिन् । ३३ वर्षीय सुवेदी ५ वर्षदेखि मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेकी छिन् । लामो समयदेखि बारमा ठूलो आवाजमा म्युजिक सुनेकै कारण आजभोलि उनको श्रवणशक्ति क्षीण हुँदै गएको छ । ‘जतिखेर पनि कान टि…. गरेर बजिरहन्छ । सानो स्वरले बोलेको त सुन्दै सुन्दिन ।’ उनले थपिन् – ‘बत्तीहरु त्यस्तै चम्किलो र रंगीबिरंगी बाल्छन् । आँखा कमजोर हुँदै गइसक्यो ।’ रातभर बारमा काम गर्नु पर्ने हुनाले उनलाई बारमै खाना खानुपर्ने बाध्यता छ । भीमालाई अहिले मृर्गौलाको समस्या देखा परेको छ । भन्छिन् – ‘कमाएको पैसाले पेट पाल्नु कि उपचार गर्नु !’
बारमा चुरोटको धुवाँ भरिएको कोठामा काम गर्नुपर्ने, रातभरि अनिदो बस्नुपर्ने, रंगीबिरंगी बत्तीमा बसिरहुनुपर्ने कारणले गर्दा दोहोरी साँझ, डान्स बार, रेष्टुराँ लगायतका मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्नेलाई महिलालाई धेरै रोगले आक्रमण गर्ने पीडितहरुले बताएका छन् ।
त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका नाक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञ डा. कुञ्जन आचार्यका अनुसार आठ घण्टा भन्दा बढी ध्वनी प्रदुषणमा बस्नेलाई कान सम्बन्धी विभिन्न समस्या देखा पर्छन् । ‘जतिखेरै कान बजिरहन्छ । कानको जाली कमजोर भइ श्रवण क्षमतामा ह्रास आउँछ ।’ उनले भने – ‘कान बजेकै कारण निन्द्रा खलबलिएर कति त मानसिक रोगी नै बन्छन् ।’